မြန်မာရေတပ်ရဲ့ အခြေအနေနှင့် အိန္ဒိယနဲ့ နီးကပ်စွာ ဆက်ဆံလာမှုကို သတိထား စောင့်ကြည့်နေတဲ့ တရုတ်.... ~ ဒီမိုဝေယံ
အောက်တိုဘာလ ၁၁ရက်နေ့က တရုတ်သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် Sina သတင်းဋ္ဌာနမှာ တင်ထားတဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ နီးကပ်စွာ ဆက်ဆံလာတဲ့ မြန်မာနဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ အနေအထားအကြောင်း ရေးထားတာလေးကို ဘာသာပြန်ပြီး အကြမ်းဖျဉ်း ဖတ်ကြည့်မိပါတယ်..။ အိန္ဒိယရေတပ် ဖရီးဂိတ်သဘောင်္ Taer Waပုံနဲ့ မြန်မာနဲ့ ဗီယက်နန် အိန္ဒိယကို တမ်းတနေတယ် (တောင်းခံနေသည်)ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အောက်တိုဘာလ ၁၂ရက်နေ့ကနေ ၁၅ရက်နေ့အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို သွားရောက်မယ့် သတင်းနဲ့ တချိန်တည်း၊ တပြိုင်တည်းမှာပဲ ဗီယက်နမ် သမ္မတZhang Jin လည်း ၁၂ရက်နေ့ကနေ ၁၄ရက်နေ့အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို သွားရောက်မယ့် သတင်းကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ လတ်တလော ပြသနာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တရုတ်နဲ့ ဆက်ဆံရေး အခြေအနေတွေကို အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ သွားရောက် ဆွေးနွေးနေတဲ့ သဏ္ဍာန် ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်..။ မြန်မာဘက်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလက တရုတ်နဲ့ စာချုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဒေါ်လာ၃.၆ဘီလယံတန် မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ရပ်တန်လိုက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကတော့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းမှာ တရုတ်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ အငြင်းပွားနေတဲ့ ကိစ္စအတွက် အိန္ဒိယကို သွားတာလို့ ဆိုပါတယ်..။
အကျဉ်းချုပ်ရေးရရင်တော့ တရုတ်နဲ့ နယ်နိမိတ်ခြင်း ဆက်စပ်နေတဲ့ မြန်မာနဲ့ ဗီယက်နမ် ၂နိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးဆိုင် ကိစ္စတွေကို အိန္ဒိယနဲ့ သဘောတူညီချက်တွေ စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်..။ နောက်လတ်တလော အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ တရုတ်ရဲ့ အိမ်နီးချင်း ၂နိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ဖို့ အိန္ဒိယက အထူးလိုအပ်နေပါတယ်...။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စီးပွားရေးတိုးတက်လာတဲ့ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၂နိုင်ငံတို့ရဲ့ နယ်စပ်ပြသနာဟာလည်း အမြဲအတက်အကျ ရှိနေလို့ပါပဲ..။
နောက်ရေးသားချက်တွေကတော့ ဗီယက်နမ် ကိစ္စတွေနဲ့ နောက်မြစ်ဆုံကိစ္စအတွက် ဦးသိန်းစိန်မှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်ကို စေလွှတ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေပါပဲ..။ နောက်တရုတ် စိုးရိမ်နေတဲ့ အချက်ကတော့ တိုးသထက်တိုး လုပ်ဆောင်လာတဲ့ အိန္ဒ္ဒ္ဒိယရဲ့ အရှေ့မျှော်ဝါဒနဲ့ အတူ မြန်မာနဲ့ ဗီယက်နမ် ၂နိုင်ငံစလုံးဟာ အိန္ဒိယရေတပ် အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ ပင်လယ်ပြင်တွေထဲ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဝင်ရောက်နိုင်ရေးနဲ့ ဒေသတွင်းမှာ ကြီးထွားနေတဲ့ တရုတ်ရေတပ်ရဲ့ ချိန်ခွင်လျှာကို ညှိဖို့အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်..။ နောက်လန်ဒန်က စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် ဒေါက်တာဇာနည်ရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်..။ မြန်မာအစိုးရဟာ တရုတ်ကို အားကိုးအားထား ပြုနေရတာကို လျှော့ချပြီး အိန္ဒိယနဲ့ အမေရိကန်ကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုတွေ ပြလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်..။ အသေးစိတ်ကို http://mil.news.sina.com.cn/2011-10-11/0828668871.html ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်..။
ရေးသားတင်ပြလိုတဲ့ အကြောင်းအချက်ကတော့ တရုတ်က မြန်မာရေတပ်အခြေအနေကို အသေးစိတ် လေ့လာသိရှိနေတဲ့ အချက်ပါပဲ...။
အထက်ပါ မြန်မာရေတပ်ရဲ့ စစ်သဘောင်္ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ စစ်တပ် အမေးအဖြေ ကဏ္ဍတခုမှာ မြန်မာရေတပ်ရဲ့ ဒီဖရီးဂိတ် စစ်သဘောင်္ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မည်သူဖြေဆိုနိုင်မလဲလို့ မေးထားပါတယ်..။
ဖြေဆိုသွားသူကတော့ မြန်မာရေတပ်ရဲ့ အနော်ရထာ Light missile frigate!ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်..။ နောက်ဘုရင့်နောင် (F772)ဟာ ၂၀၀၂ခုနှစ်မှာ တည်ဆောက်ပြီး အရှည်၇၇မီတာ ရှိကာ Crew ၁၀၅ဦးလိုက်ပါ နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...။ တပ်ဆင်ထားတဲ့ လက်နက်တွေကတော့ A 76 mm single-tube gun, two C-802 dual-mounted anti-ship missile launchers ဖြစ်တယ်လို့ ပြန်ဖြေထားတာ တွေ့ရပါတယ်..။
အောက်မှာတော့ တရုတ် အမျိုးသမီးတဦး ဖြေဆိုထားတာကတော့ မြန်မာရေတပ် အကြောင်းအသေးစိတ်ပါ..။ တရုတ်ဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြောင်း ဖော်ပြထားတဲ့ အတွက် အမှားအယွင်းများအား သိရှိသူများမှ ပြင်ဆင် ထောက်ပြပေးပါရန်..
တရုတ်အကူ အညီနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်တဲ့ 16 PA6 ရေတပ်သဘောင်္တစ်စီး
Myanmar Navy was originallyariver patrol in the Bay of Bengal and the Andaman Sea near the coast of combat capability is limited. Such as contraband smuggling rampant, the southernmost coastal surveillance and fisheries protection becomes increasingly important (Myanmar has 1,930 km of coastline). 250 armed men andanumber of small vessels (including the five-class destroyer of Carpentaria and three patrol boats) assist in the implementation of PPFC company patrolling the coast. Anti-smuggling and anti-violence in some of the soldiers driving by the Navy ships. Approximately one-third of Navy personnel responsible for inland waterway patrols, such as the Irrawaddy and Salween rivers. 800 soldiers of the Marine Corps hasacertain amphibious capability. Naval Aviation's main task is to patrol the sea. Naval Air Force fixed-wing aircraft and helicopters with bases all along the coast.
Myanmar Navy currently has approximately 15,000 active duty personnel, but only 7,000 people three years ago.
အောက်မှာတော့ မြန်မာ့ရေတပ်ပိုင် သင်္ဘောအမျိုးအစားတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေပါ...
June 1997 May 1999 ships
02 arena level (in order)
11 Yan Taine Aung ..rvettes (formerly the American PCE 894 level)
11 Yan Gyi Aung-class corvettes (formerly the American ADMIRABLE level)
22 Mon-9 level (50 m hull design of Myanmar)
33IN DAW level (Denmark, "Osprey" hull design)
0245 steel design (Myanmar)
10 12 YAN SIT AUNG level
63PGM 412
33105 Merchant Shipping (USA)
66 original U.S. PGM 43 级
33PB 90 hull design (Yugoslavia)
33 missile boats (U.S.)
44 18.3 m design river gunboats (Myanmar)
9930 gunboats (Myanmar 15.2 m hull design)
22 Improved 301 (Burma 37 m hull design)
10 10 Y301 (Yugoslavia 32 m hull design)
66PBR Mk II (USA)
66 Gulf of Carpentaria class inshore vessels (Australia)
88 various fisheries patrol
11 hydrological monitoring coastal shipping (Japan 47 m hull design)
11 DU too di hydro-tracking ship (Yugoslavia)
11 Yebo water tracking ship (Netherlands)
11 Pi Aihai shore carriers
8 8 SEBAN class river transport ship (Myanmar)
44 Aiyar Mans class landing craft (Japan)
11 Yiyalulin class landing craft (formerly the American LCU 1610 class)
10 10 LCM (3) class landing craft (U.S.)
11 YANG Ang-class support ship (Japan 54 m hull design)
1 1 YADANABON presidential yacht (builder unknown)
252530-40 tons of river tug (Yugoslavia)
11 Sade Dan supply vessels (Myanmar 40 m hull design)
11 carriers (builder unknown)
1 1 INTERBUNKER tankers (builder unknown)
Naval aviation equipment
33F27M marine patrol boats (Netherlands)
10 10 General Ship Bell 47G-3 (USA)
Myanmar Navy's headquarters in Yangon, the other hasaport in the following areas and material supply station:
ပုသိမ် [southwestern port city of Myanmar]
Large coconut tree island (Great Coco Island)(ကိုကိုးကျွန်း)
မြိတ်[Burma's southern port city of] (transliteration Mexican guitar)
မော်လမြိုင် [Burma's southern port city of] (in the Salween estuary)
ရန်ကုန် (the capital of Myanmar)
New Ma Li
စစ်တွေ [Myanmar's western port city of] (Akyab) - the main logistics base / build dock
Clean sand [the southern port city of Myanmar] (or the translation of tin Ryan) - Naval Training Center
မည်သည့်အတွက်ကြောင့် တရုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာ မြန်မာ့ရေတပ် အခြေအနေ အပြည့်အစုံအား မည်သည့်အတွက်ကြောင့် သိရှိနေကြသလဲ ဆိုတဲ့အချက်အား သိရှိသူများ ဖြေကြားပေးပါရန်နှင့် ယခုဖော်ပြထားတဲ့ ဓာတ်ပုံများကတော့ တရုတ်တွေ အနီးကပ် မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ မြန်မာရေတပ် သဘောင်္တစ်စီးရဲ့ပုံကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်..။